အောင်မြင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခု – Gentleman Magazine
၂၁ ရာစုအစောပိုင်းက လူငယ်တွေကို ကိုယ်ကျိုးကြည့် တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ မျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့ အများစုက သတ်မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အသက်အရွယ် ဒါမှမဟုတ် အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခု ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပြီး တံဆိပ်ကပ်တာက အဓိပ္ပါယ်မရှိလှပါဘူး။ မှန်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။
တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာက မိမိကိုယ်ကို ပဓာနထားခြင်းက ဘ၀အတွက် ခွန်အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထူးခြားတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး အရေးပါအရာရောက်သူ တစ်ယောက်အဖြစ် သက်သေပြနိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် သင် အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်း ပိုများမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်စိတ်ဆန္ဒကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် ဟောကိန်းတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။
Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ တည်ထောင်သူဟောင်း စတိဗ်ဂျော့ဘ် လူငယ်ဘ၀တုန်းကဆိုရင် သူဟာ မွေးစားခံထားရတာ ဖြစ်ကြောင်း အသိမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သူများမွေးစားခံရတာဟာ မိဘအရင်းတွေက စွန့်ပစ်လိုက်တာကြောင့်လို့ မိန်းကလေးက ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ အိမ်ထဲဝင်ပြေးပြီး ငိုနေခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူ့ရဲ့ မွေးစားမိခင်က သူတို့အနေနဲ့ စတိဗ်ဟာ ထူးခြားတယ်ထင်လို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကစပြီး စတိဗ်ဂျော့ဘ်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ထူးခြားသူတစ်ယောက်အဖြစ် သိမှတ်ယုံကြည်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
သို့ပေမယ့်လည်း စိတ်ဆန္ဒတွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ လမ်းကြောင်းဟာ ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးဝေ့၀ိုက်နေတတ်ပါတယ်။ မွေးစားခံခဲ့ရတဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် အနေနဲ့ သူ့မိဘအရင်းတွေက သူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက် သူဟာ သာမန်မဟုတ်တဲ့သူ ထူးခြားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ကို ထူးခြားသူတစ်ယောက်အဖြစ် တကမ္ဘာလုံးကပါ အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဟာ အမြင့်မားဆုံးအောင်မြင်သူတွေမှာ များသောအားဖြင့်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဓိကဆိုလိုရင်းက ဘာပါလဲ။ သင့်ကိုယ်သင် ထူးခြားတယ်လို့ ယုံကြည်တာက အစကောင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အစပျိုးတယ်ဆိုရုံပဲ ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိပြီး တက်ကြွနေရုံနဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဆန္ဒတွေပြည့်ဝလာပြီး ရည်မှန်းထားသမျှ ဖြစ်လာစေဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
ထက်မြက်တာ၊ အရည်အချင်းရှိတာ၊ တက်ကြွတာ၊ အသေးစိတ်လုပ်တတ်တာ စတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိနေဖို့ထက် မွေးရာပါ ပင်ကိုယ်ပါရမီတစ်ခု ရှိနေဖို့နဲ့ အဲ့ဒီပါရမီကို ပိုထူးခြားကောင်းမွန်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပင်ကိုယ်ပါရမီ မပါတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့လည်း ဘ၀အောင်မြင်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်လုပ်နေတာတွေအတွက် ပျော်ရွှင်မှုရနိုင်မလားဆိုတာကတော့ မသေချာပါဘူး။
အပြုသဘောဆောင်ပြီး အမြဲတွေးနေလို့ မရဘူး
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူအများစုက ရှုပ်ထွေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးဘ၀က စိတ်ဒဏ်ရာတွေက သင့်ကိုယ်သင် ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် မီးမွှေးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ အားလုံးကို အပြုသဘောဆောင်ပြီးပဲ တွေးနေမယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်ထဲမှာ မှားယွင်းတဲ့အသိတွေကိုပဲ ဖန်တီးနေမိမှာပါ။ ဒီလို ဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ အပြုသဘောဆောင် တွေးတာက စိတ်သက်သာရာရတာက လွဲပြီး လက်တွေ့မှာ အထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူး။
သင့်ကိုယ်သင့် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် ဒါမှမဟုတ် မာ့ခ် ကူးဘန်းတို့လို အောင်မြင်ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ့် လို့ တွေးထားချင် တွေးထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမလုပ်ပဲ ထိုင်နေပြီး စိတ်ကူးထားတာတွေ ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လေထဲတိုက်ဆောက်နေတာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် တကယ်ဖြစ်ချင်ရင် တကယ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင့်တော်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတတ်ရမယ်
သင့်အနေနဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုလည်း ရှိ၊ ပင်ကိုယ်ပါရမီလည်းရှိပြီး အလုပ်လည်း ကြိုးစားတယ် ဆိုရင်တောင်မှ သင့်ဘ၀လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေဦးမှာပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုချင်းစီတိုင်းဟာ အရေးပါအရာရောက်ပြီး ရလဒ်အဆိုးအကောင်းတွေကို ကွဲပြားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုဆိုတာက သင့်ဘ၀တစ်လျှောက် မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုး ပြောရရင် သင်အောင်မြင်ပြီးရင် အောင်မြင်နေချင်စိတ် ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှုကို မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့ စိတ်ရှိနေရာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာက သင်ရဲ့အမြင်နဲ့ သင့်ဘ၀အပေါ် သက်ရောက်မှုပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လက်ဆောင်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သလို ကျိန်စာတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ ဇွဲလုံ့လရှိပြီး မဆုတ်မနစ်လုပ်ဆောင်တတ်တာက အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ အထောက်အပံ့ကောင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကိုသင် ထူးခြားတယ်လို့ ယုံကြည်မိတဲ့အရာက ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ သင့်အတွက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူနိုင်စေဖို့ စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မယုံကြည်ထားဘူး ဆိုရင်တော့ သင်ရည်မှန်းထားတာတွေကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တွန်းအားရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုနဲ့ သာမန်ထက် မထူးခြားတဲ့ နေရာမှာပဲ ရပ်တည်နေရမှာပါ။
၂၁ ရာစုအစောပိုငျးက လူငယျတှကေို ကိုယျကြိုးကွညျ့ တကိုယျကောငျးဆနျတဲ့ မြိုးဆကျအဖွဈနဲ့ အမြားစုက သတျမှတျထားတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလို အသကျအရှယျ ဒါမှမဟုတျ အခွားအကွောငျးရငျးတဈခု ပျေါမှာ မူတညျပွီး အုပျစုတဈခုလုံးကိုသိမျးပွီး တံဆိပျကပျတာက အဓိပ်ပါယျမရှိလှပါဘူး။ မှနျတယျဆိုရငျတောငျမှ မဖွဈသငျ့တဲ့ကိစ်စပါ။
တကယျတမျးလကျတှမှေ့ာက မိမိကိုယျကို ပဓာနထားခွငျးက ဘဝအတှကျ ခှနျအားဖွညျ့ပေးနိုငျတဲ့ လှုံ့ဆျောမှုတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထူးခွားတယျလို့ ယုံကွညျပွီး အရေးပါအရာရောကျသူ တဈယောကျအဖွဈ သကျသပွေနိုငျဖို့လညျး ကွိုးစားမယျဆိုရငျ သငျ အောငျမွငျဖို့အခှငျ့အလမျး ပိုမြားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ ကိုယျ့စိတျဆန်ဒကို အမှနျတကယျဖွဈလာအောငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမယျ့ ဟောကိနျးတဈခုဖွဈနမှောပါ။
Apple ကုမ်ပဏီရဲ့ တညျထောငျသူဟောငျး စတိဗျဂြော့ဘျ လူငယျဘဝတုနျးကဆိုရငျ သူဟာ မှေးစားခံထားရတာ ဖွဈကွောငျး အသိမိနျးကလေးတဈယောကျကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို သူမြားမှေးစားခံရတာဟာ မိဘအရငျးတှကေ စှနျ့ပဈလိုကျတာကွောငျ့လို့ မိနျးကလေးက ပွနျပွောတဲ့အခါမှာ စတိဗျဂြော့ဘျ ဟာ အိမျထဲဝငျပွေးပွီး ငိုနခေဲ့ရပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ မှေးစားမိခငျက သူတို့အနနေဲ့ စတိဗျဟာ ထူးခွားတယျထငျလို့ ရှေးခယျြခဲ့တာဖွဈကွောငျး နှဈသိမျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခြိနျကစပွီး စတိဗျဂြော့ဘျဟာ သူ့ကိုယျသူ ထူးခွားသူတဈယောကျအဖွဈ သိမှတျယုံကွညျထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ
သို့ပမေယျ့လညျး စိတျဆန်ဒတှေ အမှနျတကယျဖွဈလာဖို့ လမျးကွောငျးဟာ ထငျထားတာထကျ ပိုပွီးဝဝေို့ကျနတေတျပါတယျ။ မှေးစားခံခဲ့ရတဲ့ စတိဗျဂြော့ဘျ အနနေဲ့ သူ့မိဘအရငျးတှကေ သူ့ကိုစှနျ့ပဈခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျထဲမှာရှိနတေဲ့အတှကျ သူဟာ သာမနျမဟုတျတဲ့သူ ထူးခွားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈကွောငျး သကျသပွေနိုငျဖို့ အမွဲကွိုးစားခဲ့ပါတယျ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့စိတျဆန်ဒတှေ ပွညျ့ဝလာခဲ့တာ ဖွဈပွီး အမှနျတကယျကို ထူးခွားသူတဈယောကျအဖွဈ တကမ်ဘာလုံးကပါ အသိအမှတျပွုခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုဖွဈစဉျမြိုးတှဟော အမွငျ့မားဆုံးအောငျမွငျသူတှမှော မြားသောအားဖွငျ့တှရေ့တတျပါတယျ။ ဒီတော့ အဓိကဆိုလိုရငျးက ဘာပါလဲ။ သငျ့ကိုယျသငျ ထူးခွားတယျလို့ ယုံကွညျတာက အစကောငျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အစပြိုးတယျဆိုရုံပဲ ရှိပါသေးတယျ။ စိတျဓာတျခှနျအားရှိပွီး တကျကွှနရေုံနဲ့ ဘာမှဖွဈမလာနိုငျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ ဆန်ဒတှပွေညျ့ဝလာပွီး ရညျမှနျးထားသမြှ ဖွဈလာစဖေို့ လိုအပျခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိပါသေးတယျ။
ထကျမွကျတာ၊ အရညျအခငျြးရှိတာ၊ တကျကွှတာ၊ အသေးစိတျလုပျတတျတာ စတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှေ ရှိနဖေို့ထကျ မှေးရာပါ ပငျကိုယျပါရမီတဈခု ရှိနဖေို့နဲ့ အဲ့ဒီပါရမီကို ပိုထူးခွားကောငျးမှနျအောငျ လုပျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ပငျကိုယျပါရမီ မပါတဲ့အရာတဈခုနဲ့လညျး ဘဝအောငျမွငျမှုကို တညျဆောကျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျလုပျနတောတှအေတှကျ ပြျောရှငျမှုရနိုငျမလားဆိုတာကတော့ မသခြောပါဘူး။
အပွုသဘောဆောငျပွီး အမွဲတှေးနလေို့ မရဘူး
ဒီအခကျြနဲ့ပတျသကျပွီး လူအမြားစုက ရှုပျထှေးသှားတတျကွပါတယျ။ ကလေးဘဝက စိတျဒဏျရာတှကေ သငျ့ကိုယျသငျ ထူးထူးခွားခွားအောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျကွောငျး သကျသပွေနိုငျဖို့အတှကျ မီးမှေးပေးတာ ဖွဈပါတယျ။ အရှယျရောကျခြိနျမှာ အားလုံးကို အပွုသဘောဆောငျပွီးပဲ တှေးနမေယျဆိုရငျ သငျ့စိတျထဲမှာ မှားယှငျးတဲ့အသိတှကေိုပဲ ဖနျတီးနမေိမှာပါ။ ဒီလို ဘာဖွဈဖွဈကောငျးပါတယျဆိုတဲ့ အပွုသဘောဆောငျ တှေးတာက စိတျသကျသာရာရတာက လှဲပွီး လကျတှမှေ့ာ အထောကျအကူမဖွဈပါဘူး။
သငျ့ကိုယျသငျ့ ဒျေါနယျထရမျ့ပျ ဒါမှမဟုတျ မာ့ချ ကူးဘနျးတို့လို အောငျမွငျခမျြးသာသူတဈယောကျဖွဈရမယျ့ လို့ တှေးထားခငျြ တှေးထားလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမှမလုပျပဲ ထိုငျနပွေီး စိတျကူးထားတာတှေ ဖွဈလာဖို့ မြှျောလငျ့နမေယျဆိုရငျတော့ လထေဲတိုကျဆောကျနတောပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ တကယျဖွဈခငျြရငျ တကယျလုပျဖို့ လိုပါတယျ။
သငျ့တျောတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခတြတျရမယျ
သငျ့အနနေဲ့ စိတျအားတကျကွှမှုလညျး ရှိ၊ ပငျကိုယျပါရမီလညျးရှိပွီး အလုပျလညျး ကွိုးစားတယျ ဆိုရငျတောငျမှ သငျ့ဘဝလမျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ ရှေးခယျြစရာတှေ အမြားကွီးရှိနဦေးမှာပါ။ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခုခငျြးစီတိုငျးဟာ အရေးပါအရာရောကျပွီး ရလဒျအဆိုးအကောငျးတှကေို ကှဲပွားစမှော ဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျမှုဆိုတာက သငျ့ဘဝတဈလြှောကျ မှနျကနျသငျ့တျောတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှပေျေါမှာ မူတညျပါတယျ။
ဒီအခကျြကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စဉျဆကျမပွတျလှုံ့ဆျောနနေိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈမြိုး ပွောရရငျ သငျအောငျမွငျပွီးရငျ အောငျမွငျနခေငျြစိတျ ဘယျတော့မှ အောငျမွငျမှုကို မတငျးတိမျနိုငျတဲ့ စိတျရှိနရောမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအရာက သငျရဲ့အမွငျနဲ့ သငျ့ဘဝအပျေါ သကျရောကျမှုပျေါမှာ မူတညျပွီး လကျဆောငျတဈခု ဖွဈနိုငျသလို ကြိနျစာတဈခုလညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကောငျးတာတဈခုကတော့ ဇှဲလုံ့လရှိပွီး မဆုတျမနဈလုပျဆောငျတတျတာက အခကျအခဲနဲ့ရငျဆိုငျရတဲ့အခြိနျတိုငျးမှာ အထောကျအပံ့ကောငျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
သငျ့ကိုသငျ ထူးခွားတယျလို့ ယုံကွညျမိတဲ့အရာက ဘာပဲဖွဈနပေါစေ သငျ့အတှကျ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ရယူနိုငျစဖေို့ စိတျဓာတျလှုံ့ဆျောမှုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒီလို မယုံကွညျထားဘူး ဆိုရငျတော့ သငျရညျမှနျးထားတာတှကေို အမှနျတကယျဖွဈလာအောငျ လုပျဆောငျနိုငျဖို့ တှနျးအားရှိမှာ မဟုတျပါဘူး ဒီလိုနဲ့ သာမနျထကျ မထူးခွားတဲ့ နရောမှာပဲ ရပျတညျနရေမှာပါ။
Previous: ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လား ? အပျော်တမ်းသမားလား ?
Next: ဖောက်သည်တွေကို ထိန်းထားနိုင်မည့် နည်းလမ်း (၂)ခု